Imibala yokuprinta imishini yamanani China Manufacturer
Incazelo:Ukunyathelisa ama-Machines Price,Umshini Wokunyathelisa Umbala,Umbala wokunyathelisa umbala
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-Digital > I-T Shirt Printer > Imibala yokuprinta imishini yamanani
Ifakwe nekhanda lokunyathelisa le-Epson DX5 langempela ngamashubhu angu-90 ngesiteshi ngasinye , ama-nozzles angu- 540 (6color * 90), 1.5pl ibhuloho ngayinye. Amakhasimende amaningi aqhuba ibhizinisi lawo kahle ngemuva kokuthenga Umshini Wokunyathelisa Umbala wethu , izindleko ezimbalwa zenza inzuzo enkulu. Siyakwamukela ukuthumela uphenyo kithi, singumkhiqizi wangempela hhayi umthengisi noma umthengisi, sinikeza isevisi engcono, ubuchwepheshe obuphezulu kanye nenani elihle kuwe. Le Mithamo Yokunyathelisa Imishini Yamabala ngokugcwele okuzenzakalelayo, sengeza i-infrared ray, izothola ukuphakama okungcono kakhulu kokunyathelisa ngokwakho. Ukunyathelisa ama-Machines Price sikunike imali enhle emakethe kanye nekhwalithi engcono kakhulu
1. Ukuzenzekela okugcwele, vele usebenzise ikhompyutheni ukuze uprinte, akudingeki ukuthi ulungiselele inkinobho ye- Color Poster Printing
3. Imibala engu-6 kufaka phakathi i-CMYK + WWWW ukwenza yonke imibala yekhati ephrintiwe kubandakanya omhlophe, omnyama, obomvu, ophuzi, obomvana, njll.
Umshini Wokunyathelisa Umbala
Ukunyathelisa ama-Machines Price Umshini Wokunyathelisa Umbala Umbala wokunyathelisa umbala Ukunyathelisa ama-Machines Printer Ukunyathelisa Umshini Wekhofi Ukunyatheliswa komkhiqizo we-Tshirt I-Shoes Machine Printer Ikhofi ne-Latte Machine Printer